China N'ogbe High Quality Piel Plastic 12 Ab Kpaa Neno Chain Rhinestone Banding trimming N'ihi Uwe Manufchọ Mma rụpụta na Factory | Erjiao
N'ogbe High Quality Uzo Plastic SS12 Ab Kpaa Neno Chain Rhinestone Banding Trimming N'ihi Uwe Dechọ Mma
Isi nkọwa nkọwa ngwa ngwa Typedị ngwaahịa: Rhinestones Ihe: Glass, Glass Rhinestone na Plastic Shape: Gburugburu Rhinestones :dị: Loose Rhinestones Technics: moldkpụzi ọgwụ, enweghị nkọwa, ụdị a na-akọwaghị: Flatback Jiri: Akpụkpọ ụkwụ, Akpa, Uwe, Ebe Ndị Ọzọ: China Brand Name : Zhuyi Model Number: SS6, SS8, SS12 Aha aha: Plastic Rhinestone Banding Usage: Uwe akpụkpọ ụkwụ Akpa T-shirt MOQ: 1600 yaadị kwa agba, ọ bụrụ na m nwere ngwaahịa, kaadị 1 dị mma. ...
Ọkpụkpụ ọgwụ na-akpụzi, enweghị nkọwa, akọwaghị
Akpụkpọ ụkwụ, Akpa, Uwe, Ndị ọzọ
1600 yards kwa agba, ọ bụrụ na m nwere ngwaahịa, kaadị 1 dị mma.
10 kaadị yards, 50 yards mpịakọta, 100 yards mpịakọta
Ab Trim Neno Chain Rhinestone Banding Na-egbutu Ihe Maka Dechọ Mma
2000000 Yard / Yard kwa izu
Ogwe kaadị 10. 50 yad mpịakọta. 100 yad tụgharịa.
Ibu (Yards) 1 - 10000 10000
Aha Ngwaahịa N'ogbe ụlọ ọrụ zuru ezu SS8 rhinestone iko yinye uwe agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ
Isiokwu akwa akwa
Ihe Nlereanya MJA134
Matrial & Size Igwe Rhinestones + Olastic Cup Chain, SS6 / SS8 / SS10 / SS12, wdg.
Agba Dị ka arịrịọ ndị ahịa
.Dị Rhinestones iko Chain
MOQ 1600 yards kwa agba
Ihe nlele Nye ihe nlele efu
Oge Mbuga Ozi Ọ bụrụ na naanị ịlele, a ga-ezipụ na 2 ~ 3ụbọchị, Ọ bụrụ na ahaziri ya, dabere na Rhinestone 'Order
Kwụ .gwọ L / C, T / T, Wester union, Moneygram, Paypal, wdg
Chain agba Họrọ
A.Onye bu anyi?
Anyị bụ ndị Yiwu City Zhuyi ọla Ngwa Factory, a ọkachamara uwe ngwa Factory, nwere ihe mgbe ahụ 20years ahụmahụ maka uwe Ment, ị dị nnọọ mkpa iji zipu arịrịọ gị, anyị nwere ike ime ihe nlele ahụ dịka arịrịọ gị n'oge dị mkpirikpi, ọla edo anyị: Iji Mee Ka Uwe Gị Mara Mma!
Anyị na-enye Ihe Nlereanya, ọ bụrụ na naanị ngwaahịa anyị, ga-abụ n'efu, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịhazi ya, anyị ga-akwụ ụgwọ ụfọdụ. Ikwesiri ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ nzipu.
C. Ahịa Ahịa:
Naanị gwa m prodcut ị masịrị gị, Ngwaahịa Ahịa Nke sitere na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ zitere m njikọ ahụ, foto, na ọnụ ọgụgụ gị, mgbe ahụ anyị ga-agụta ọnụahịa anyị. Maka ọnụahịa weebụsaịtị, ọ bụ maka ntụnye naanị.
Ọ dabere na ngwaahịa dị iche iche, Ogo, agba na ndị ọzọ
E.:Gịnị mere Họrọ nke Anyị:
Ihe Nlereanya: Ihe Nlereanya efu
b.Our Product quality bụ nnọọ strick, na nwere ihe mgbe ahụ 20years ahụmahụ,
c. ihe Anyị nwere ọtụtụ knids nke ngwaahịa, naanị ị ga-ezitere m mkpa gị, anyị ga-edozi ha n'oge dị mkpirikpi
d.We nwere ezu ngwaahịa, na-anabata ahaziri na kasị ala moq
F.: Haziri Nwepụta nke Gị
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhazi arịrịọ arịrịọ gị (nnwale, nha, agba, ọdịdị, akara, mbukota, mgbakwunye), zitere anyị atụmatụ gị, anyị nwere ike ịme gị nlele ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, kpọtụrụ kpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: High Quality Stone Chain Plastic Rhinestone Banding trimming maka Uwe
na-agbanwe crystal trimming plastic base shinning ...
Ahaziri Cloth Akpụkpọ ụkwụ Akpa ọkwa ọkwa AAA Rhineston ...
Factory SS6 Fashion ngwaahia Rhinestone 2.7mm ...
N'ogbe Mara mma Stone Rhinestone trimming P ...
N'ogbe Rhinestone Kpaa N'ihi Wedding echebe, Pla ...
Yi Bulk Plastic Rhinestone Banding, Plast ...